I-CascaisCenter | I-HistoricTown&Beach - I-Airbnb
I-CascaisCenter | I-HistoricTown&Beach
Ifulethi elisanda kulungiswa lamakamelo okulala angu-2 enkabeni yendawo Yomlando yedolobha lasebhishi lase-Cascais. Ifulethi linakho konke okudingekayo futhi liseduze nawo wonke amasevisi, uhambo olufushane lwemizuzu engu-5 kuya kwengu-10 ukuya kuwo wonke amabhishi asendaweni nesiteshi sesitimela. Ukuhlukaniswa kutholakala endaweni ephephile enesiphephelo esinikeza ukuphepha nokuba wedwa kuyilapho iseduze nakho konke lokho i-Cascais ekunikezayo.
Leli fulethi lisanda kulungiswa ngokuphelele (ikhishi elisha eligcwele, indlu yokugezela entsha, indawo ephansi entsha, amafasitela amasha ashisayo kanye nokupendiwe kabusha). Iyunithi inakho konke okudingekayo futhi inikeza ukufinyelela okulula kuwo wonke amabhishi endaweni kanye nesiteshi sesitimela sendawo esinikeza ukufinyelela okulula e-Lisbon. Inamakamelo okulala amabili futhi ihlalisa kalula abantu abadala abangu-4 noma umndeni wabantu abangu-4.
4.88 · 143 okushiwo abanye
Indawo engumakhelwane ithule kakhulu futhi inokuthula endaweni yangasese, futhi ikuvumela ukuba ulale ngokuthula ebusuku. Isondelene nakho konke okuhlinzekwa yi-Cascais, impilo yasebusuku, amabhishi, iminyuziyamu kanye nezindawo eziningi zokubuka indawo ziqhele ngebanga elifushane.
Ngizojabula ukuphendula yonke imibuzo ongaba nayo mayelana neyunithi ngokwayo futhi nginikeze imininingwane ewusizo mayelana nezindawo eziseduze ezithandwayo. Uma unokuthile okukhethekile engqondweni ngazise ngaphambi kokuba ufike futhi ngizoba nemininingwane ethile elungele wena lapho ufika.
Ngizojabula ukuphendula yonke imibuzo ongaba nayo mayelana neyunithi ngokwayo futhi nginikeze imininingwane ewusizo mayelana nezindawo eziseduze ezithandwayo. Uma unokuthile okukh…
Inombolo yepholisi: 84309/AL.